people Nepal » झरीका बीच दोस्रो चरणको चुनावमा पनि उत्साहपूर्ण मतदान (कुन प्रदेशको कस्तो चुनावी तथ्याङ्क ?) झरीका बीच दोस्रो चरणको चुनावमा पनि उत्साहपूर्ण मतदान (कुन प्रदेशको कस्तो चुनावी तथ्याङ्क ?) – people Nepal
झरीका बीच दोस्रो चरणको चुनावमा पनि उत्साहपूर्ण मतदान (कुन प्रदेशको कस्तो चुनावी तथ्याङ्क ?)
Posted on June 28, 2017 June 28, 2017 by Purna Nanda Joshi
काठमाडौं– दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव अन्तगर्त आज तीन वटा प्रदेशका ३५ जिल्लामा मतदान जारी छ । जनता मतदानमा उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागी भएका छन् ।
बिहानैदेखि मतदानस्थलमा मतदाताको लामो भीड देखिएको छ । पूर्वी नेपालका केही जिल्लामा पानी परेका कारण मतदान सामन्य प्रभावित भएपनि अन्य ठाँउमा राम्रोसँग मतदान भैरहेको छ । केही ठाँउमा विवाद पनि भएका छन् ।
राजपा प्रभावित जिल्लाहरुमा पनि चुनावमा कुनै समस्या देखिएको छैन । नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुको दक्षिणी भेगमा पनि शान्तिपूर्ण रुपमा चुनाव भैरहेको समाचार आएका छन् । चुनाव बहिस्कार गरेपनि राजपाका स्थानीय नेताहरुले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
आजको चुनावमा ६२ हजार ४०८ उम्मेदवार मैदानमा छन् । १५ हजार ३८ जना जनप्रतिनीधि चयन हुँदैछन् । आज ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा चुनाव भएको छ । जसमा १ महानगरपालिका, ७ उपमहानगरपालिका, १११ नगरपालिका र २१५ गाँउपालिकामा चुनाव भैरहेको छ ।
आज प्रदेश नम्वर १ का १४ जिल्लामा चुनाव हुँदैछ । जहाँ १३७ स्थानीय तह छन् । महानगर–१, उपमहानगर २, नगरपालिका ४६ र गाउँपालिका ८८ छन् । ११५७ वडा रहेको एक नम्वर प्रदेशमा १८३१ मतदान स्थल छन् भने ३४५९ मतदान केन्द्र छन् । १ नम्वर प्रदेशमा २६ लाख ७२ हजार पाँच सय ६३ मतदाता छन् ।
प्रदेश नम्वर ५ मा १२ जिल्ला छन्, जसमा नवलपरासी र रुकुमका केही भाग पनि छन् । यहाँ १०९ स्थानीय तह अन्तर्गत उपमहानगरपालिका ४, नगरपालिका ३२ र गाउँपालिका ७३ छन् । यो प्रदेशमा १६१२ मतदान स्थाल र ३१२५ मतदान केन्द्र छन् । यहाँ २४ लाख ५४ हजार चार सय ८८ मतदाता छन् ।
यसबाहेक चुनाव भैरहेको ७ नम्वर प्रदेशमा ९ जिल्ला छन् । यहाँ जम्मा ८८ स्थानीय तह छन्, जसमा उपमहानगर १, नगरपालिका ३३ र गाउँपालिका ५४ छन् । यहाँ ७३४ वडा छन्, ११०८ मतदान स्थाल छन भने १७८० मतदान केन्द्र छन् । यहाँको मतदाता सख्या १३ लाख ती हजार सात सय १४ छ ।